Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo dooneya in ay cunoqabateynta ka qaadaan Eriteeriya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeEast AfricaGolaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo dooneya in ay cunoqabateynta ka qaadaan Eriteeriya
November 5, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh East Africa, World 0
New York-(Puntland Mirror) Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa isku diyaarinaya in ay cunoqabateynta ka qaadaan Eriteeriya kadib markii Mareykanku uu iska tuuray ku adkeysigiisii ku aadana aarintaas, sida ay ku warantay wakaalada wararka AFP oo sii xigatay diblomaasiyiin.
Britain ayaa golaha u qeybisay qaraar Khamiistii kaasoo ay ku dalbanayso in laga qaado xayiraada hubka iyo dhammaan safarka, joojinta hantida iyo cunoqabateynaha lala beegsaday Eriteeriya, sida ay sheegtay AFP.
Golaha ayaa qorshuhu yahay in cod ay u qaadaan qaraarka bisha November 14-keeda. Diblomaasiyiinta ayaa sheegaysa in tilaabooyinka la qaaday kadib markii Mareykanku uu badalay go’aankiisii.
Eriteeriya iyo Itoobiya ayaa heshiis nabadeed wada saxiixday bishii July ee sanadkan, balse Mareykanka oo ay taageerayaan France iyo Britain, ayaa ku adkeystay in Eriteeriya ay marka hore muujiso dadaalka xushmeynta xuquuqda aadanaha kahor inta aan laga qaadin cunoqabateynta.
Balse go’aankaas ayaa dhawaan isbadalay. Isbadalka ayaa qaar katirsan diblomaasiyiinta ay sheegeen in uu go’aansaday la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton, kaasoo la socday colaada Eriteeriya iyo Itoobiya markii uu soo noqday safiirka Qaramada Midoobay.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobaya ayaa cunoqabateynta saaray Eriteeriya sanadkii 2009 iyada oo lagu eedeeyay in ay taageerto xagjiriinta Al-Shabaab ee ku sugan gudaha Soomaaliya, balse qorshaha qabyada ah ayaa sheegay in kooxda dabagalka ee Qaramada Midoobay aysan helin cadeymo la hubo oo ku saabsan in Eriteeriya ay taageerto Al-Shabaab.
Dowladda Eriteeriya ayaa wakhti dheer diidanayd in ay taageerto maleeshiyada Al-Shabaab.
Cunoqabateynaha iyo xayiraada hubka ayaa dhammaanaya maalinta la ansixin doono go’aanka, sida uu muujinayo qoraal ay aragtay AFP.
Itoobiya iyo Soomaaliya oo xiriir wanaagsan bilihii u dambeeyay la yeeshay Asmara ayaa taageeraya baaqyada cunoqabateynta looga qaadayo Eriteeriya.
Eriteeriya ayaa xornimadeeda ka qaadatay Itoobiya horaantii 1990, waxaana markaas kadib uu dagaal ka dhex qarxay kaasoo muddo toban sanno ku dhow ka socday xadka ay ku muransanaayeen.
Sanadkii 2002, kala soocida xadka oo ay waday Qaramada Midoobay ayaa ujeedku ahaa in lagu xaliyo muranka, balse Itoobiya ayaa diiday in ay u hoggaansamaan.
Isbadalka ayaa bilowday bishii June markii Itoobiya aya iclaamisay in ay dib ugu celin doonto Eriteeriya deegaanada lagu muransanaa oo ay kamidtahay magaalada salka u ahayd colaada ee Badme halkaas oo ahayd meeshii ugu horeysay ee uu ka qarxay dagaalkii xadka ee u dhaxeeyay labada dal.
Somali knife attacker kills American woman in London
London-(Puntland Mirror) An American woman was killed in stabbing attack in London’s Russel square by a Norwegian man of Somali origin, police said. The man was also wounded five people, and they are, British, American, [...]
Juba-(Puntland Mirror) Madaxweyne ku xigeenka cusub ee dalka Koonfurta Suudaan Taban Deng Gai ayaa ku eedeeyay hoggaamiyaha falaagada Riek Machar inuu daahinayo heshiiskii nabada oo ujeedkiisuu ahaa soo afjarida colaadaha ka jira Koonfurta Suudaan. Taban [...]